Bentley Systems waxay magacawday Dr. Nabil Abou-Rahme oo ah Agaasimaha Cilmi-baarista - Geofumadas
Abriil, 2019 tabo cusub, Microstation-Bentley
Dugsiyada tacliinta sare ee Bentley Digital Digital Academy waxay ku dadaalayaan inay taageeraan mashruucyo muujinaya bandhigyo muujinaya faa'iidooyinka kaabayaasha dhismaha twin digital.
LONDON, Boqortooyada Ingiriiska - Saamaynta Infrastructure Future Future - April 10 2019 - Bentley Systems, Incorporated, bixiyaha caalamiga ah ee hormuudka ka ah xal dhamaystiran si loo horumariyo howlaha design software, dhismaha iyo kaabayaasha, ayaa maanta ku dhawaaqday in Dr. Nabil Abou-Rahme ayaa ku biiray Bentley Sarkaalka cilmi-sare for Digital Progress tacliinta sare ee Institute Bentley. Waxaa xafiisyada ee London Bentley iyo Bentley shaqayn doona waxay keeni doontaa dadaallada cilmi ah ee horumarinta digital, dowladda, jaamacad iyo warshadaha aragtida shaqeeya sidii loo dhiiri xal cusub si loo horumariyo kaabayaasha. Doorkiisa cusub ayaa maanta soo bandhigay in cilmi kale oo ka qeyb galay Abaabul Abaabul Mucaarad mustaqbalka kuwaas oo ku kulmay Bentley ee Akadamiyadda Horumarinta Dijital ah ee London.
Dr. Abou-Rahme ka latalin caalamka Mott MacDonald, halkaas oo uu si firfircoon uga qayb-galay isbadal digital, ugu dhawaan madaxa kaabayaasha caqli iyo hogaamiyaha dhaqanka caalamiga ah ee xogta sayniska, iyo ka hor in, sida ku biiraya Bentley Agaasimaha qaybta gaadiidka caqliga. Xirfaddiisa waxay ka bilaabantay cilmi baaris la adeegsado oo ku saabsan is-wacyigelinta shabakada iyo kantaroolka Shaybaadhka Cilmi-baarista Gaadiidka, halkaas oo uu u sii waday inuu maamulo kooxo cilmi-baaris ah isla markaana buuxiyo PhD Faahfaahinta farsamooyinka dambe ee hawlaha la-talinta waxay ka mid yihiin qeexidda tilmaamaha EU Directive ITS, hirgelinta nidaamyada bixinta lacag la'aanta ah oo ay hogaaminayaan bangiga gaadiidka dadweynaha ee Koonfurta Afrika iyo horumarinta nidaamyada hawlgalka ee "wadooyinka waawayn" Boqortooyada Ingiriiska.
Maamulaha Bentley Systems Greg Bentley ayaa yiri: "Waxaan ku faraxsanahay in Dr. Abou-Rahme uu nagu soo biiray si uu ugu guuleysto doorka aan u heyno agaasimaha cilmibaadhista. Ugu dambeyntii, waxaan leenahay injineernimo istiraatiji ah iyada oo loo marayo laba mataano ah, iyada oo loo marayo isku xirnaanta teknoolajiyada si ay ula siman yihiin shuruudaha aasaasiga ah ee qaabka dijitaalka ah, qaybaha dhijitaalka ah iyo taariikhda dijitaalka ah. Natiijadu waxay tahay, mudnaanta ku habboon ee Dugsiyada Horumarinta Dijital Horumarinta Dijital ah ee Bentley waa inay la shaqeeyaan ururrada cilmi-baarista si ay u sahamiyaan una muujiyaan faa'iidooyinka sii kordhaya, kuwaas oo horayba laga soo qaadan karo laba mataano ah oo kaabayaal ah. "Iyadoo ay ugu wacan tahay isku-dhafka gaarka ah ee khabiirada injineernimada iyo khibradaha cilmi-baarista, iyo xiisaha faafa ee" noqda dijital ", Nabil wuxuu bixiyaa tayo wanaagsan si uu u hoggaamiyo dadaallada wada shaqaynta."
Abou-Rahme Dr. ayaa yiri: "Bentley ayaa ballanqaad cad oo si loo dardar-dhigidda tiknolojiyada digital, oo ay ku jiraan horumarinta BIM iyada oo mataano digital. Qayb muhiim ah oo baaritaan ku horumarka digital waa hawleed mashaariic bandhig, prototypes iskaashi in ay noogu suurto gasho si ay u sahamiyaan farshaxanka suurto gal ah, halka kabaallaynta khibrad ugu fiican tacliinta, farsamo iyo warshadaha kooxood kuwaas gudahood. Ballan-qaadkayagu wuxuu sidoo kale sii fidiyaa taageeridda hay'adaha tacliinta iyada oo loo marayo kafaala-qaad iyo samaynta teknooloojiyadayada oo loo heli karo qalab waxbarasho iyo horumarineed. Habka furan iyo iskaashi abuurnimo Bentley si fiican u dhisan, oo aan ku faraxsanahay in aan keeni faylalka tacliimeed si wajiga labaad ee fulinta ".
Abou-Rahme, injineer u kiraysnaa, heysta PhD ah ee tirakoobka Bayesian University Southampton, Master of Science ah ka University College London, shahaadada koowaad ee injineernimada sokeeye ka Imperial College London iyo shahaado of maamulka guud ee Roffey Park.
In uu hadalka maanta Dood Cilmiyeed ku Kaabayaasha Future, shir labo maalin qaatay khubaro ka tirsanaa warshadaha, cilmi-jaamacadeed iyo madaxda opinion ah si ay uga hadlaan mustaqbalka ee kaabayaasha, Abou-Rahme Dr gudbiyo dhowr mashaariic cilmi-kafaalo Machadka Bentley ee dunida oo dhan, oo ay ku jiraan mashaariic bandhig at University College London, University of Cambridge iyo Imperial College iyo daneeyayaasha lagu dhiirigelinayaa in ay la shaqeeyaan mashaariicda bandhig mustaqbalka in aad la xiriiri Bentley.Institution@bentley.com.
Ku saabsan Bentley Machadka tacliinta sare ee digitalka
initiative An of Systems Bentley, Digital Advancement tacliinta sare Bentley Institute waxay bixisaa gaar ah oo cusub oo dhexdhexaad ah in ay si furan uga wada hadlaan caqabadaha iyo guulaha ee deegaanka dhisay, iyo si loo dardar-iyo tayadoodii istaraatijiyad digital (BIM). Digital Advancement tacliinta sare waxa uu la xidhiidhaa warshadaha ee ay u dhaqmaan sidii qaar kaaliya ee is-dhaafsiga ee aqoonta, iyadoo la isticmaalayo nidaamka shay-in ay taageeraan hirgelinta diirada ku salaysan natiijooyinka ee abuurka iyo hawlgalka digital iyo hantida jirka hab.
Bentley Systems waa bixiyaha caalamiga ah ee bixiya talooyinka software-ka ee injineerada, dhismayaasha, xirfadlaha geospatial, dhisayaasha iyo mulkiilayaasha mulkiilayaasha dhismayaasha, dhismaha iyo kaabayaasha kaabayaasha.
Bentley Systems shaqeeya in ka badan 3,500 asxaabta, abuuraa dakhliga sannadlaha ah ee $ 700 million dalalka 170 ayaa lacag ka badan $ 1,000 million ee cilmi, horumarka iyo qaniimooyin tan 2012. Tan iyo markii la aasaasay ee 1984, shirkadda ayaa weli intooda badan ay leeyihiin shan Aasaasayaasha ay, walaalaha Bentley. Bentley xawaalad saamiyada martiqaad suuqa gaarka ah NASDAQ; rafiiqa istiraatiiji Siemens AG ayaa helay xiisaha laga tirada badan yahay oo aan xuquuqda codbixinta. Www.bentley.com
Post Previous«Previous Leica Geosystems waxay soo bandhigaysaa qalab cusub oo lagu hirgelinayo xogta shaxda
Post Next Qaado heerarka sare ee wadada Google EarthNext »